ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ Basecamp အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ Martech Zone
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ Basecamp အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ
စနေနေ့, ဧပြီ 7, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အရင်တုန်းကငါကပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ 37 အချက်ပြ။ ငါသူတို့က user interface ကိုဒီဇိုင်းနှင့်ရိုးရှင်းအတွက်သူတို့နေ့ကိုရှေ့ဆက်ခဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စာအုပ် ရီးရဲလ်ကိုရယူခြင်းကျွန်ုပ်သည်ကုန်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များကိုမည်သို့တည်ဆောက်ပုံ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်ဆဲဖြစ်သည်။ ငါကအသုံးချပါတယ် Basecamp ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကတည်းကအဲဒီမှာငါ့အစီမံကိန်းများနှင့်ဖောက်သည်အများအပြားအကောင့်နှင့်ခြေရာခံ။
ဖတ်နေစဉ် 37 အချက်ပြ ဘလော့ဂ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဘလော့ဂ်၏လေသံသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ အချက်အမှု၌, ဒီ post။ 37 Signals သည်အင်တာနက်နှင့်အော့ဖ်လိုင်းအပလီကေးရှင်းများအားလုံး ၀ နေရာတိုင်း၌ဆက်သွယ်မှုသည်အရာတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုလုံးဝပယ်ချသည်။ ဒီမှာဘလော့ဂ်မှာရေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော့်မှတ်ချက်။
သင်ကြည့်နေသောရှုထောင့်သည်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အချက်ပြ ၃၇ ခုပါသောပန်ကာတစ် ဦး အဖြစ်အမှန်တကယ်တုန်လှုပ်သွားသည်။ သင်အွန်လိုင်းချိတ်ဆက်မှုနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ရောနှောနေသည်။
၎င်းသည်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သယံဇာတစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Laptop ၏အရင်းအမြစ်များကို server ၏အရင်းအမြစ်များကဲ့သို့ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်သည့်အပြင် application နှစ်ခုရှိသည့် bandwidth ကိုမျှမျှတတအသုံးချနိုင်သည့် application ရှိလျှင်၎င်းသည်ပါ ၀ င်သူအားလုံးအတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
ငါသည်လည်း f-bomb ကိုအသုံးပြုမှုလုံးဝမလိုအပ်သောခဲ့ကြောင်းမှတ်စုတစ်ခုကဆက်ပြောသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုပြုလုပ်သောစစ်တမ်းတစ်ခုတွင်တုံ့ပြန်မှု ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဆွေးနွေးခြင်းကိုသူတို့မကြိုက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ပို့စ်အမြောက်အများတွင်၎င်းကိုရယ်စရာပုံစံဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော်အချက်ပြ ၃၇ ခုရှိဘလော့တွင်၎င်းသည်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ငါ့ထံသို့, သူတို့နှင့်အတူသဘောမတူစေခြင်းငှါသောစာဖတ်သူကို။ ဒါဟာမလေးစားဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုအမှားမလုပ်မိအောင်ငါအရမ်းဂရုစိုက်တယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်၎င်းတို့နှင့်စိမ်းကားမည့်အစားစာဖတ်သူများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားသည်။
ငါကျိန်ဆိုခြင်းကိုအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါဘူး Basecamp ဒီနေ့အကောင့် ငါရှိခဲ့သည့်အသုံးပြုသူ ၁၂ ယောက်အနက်ငါသည် Basecamp ကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါ၏မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတစ် ဦး တည်းသောသုံးစွဲသူဖြစ်ခဲ့ပြီး (ငါအကောင့်အတွက်ပေးချေခဲ့သည့်) အခြားအရာတစ်ခုကိုလုပ်ရန်ပစ္စည်းတစ်ခုထည့်လိုက်သည်။ ကြှနျုပျ၏ရိုးသားသောထငျမွငျခကျြအရ, application တစ်ခု၏အသုံးဝင်မှုရှိမှုကိုစစ်မှန်သောစမ်းသပ်မှုမှာလူများက၎င်းကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေမသည်။ ကျွန်တော့်ဖောက်သည်တွေနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကတော့ တကယ်တော့ငါသူတို့အသုံးပြုရတာအဆင်မပြေလို့မသုံးတာကိုရှောင်ကြဉ်တယ်လို့ငါထင်တယ်။
ဒါကလည်းငါပယ်ဖျက်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကသူတို့ဘလော့ဂ်သည်အဝိဇ္ဇာနောက်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ လူများသည်အီးမေးလ်များကို scroll မလုပ်ပါ။ scrolling လုပ်ရန်လိုအပ်သောကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးထားသောအီးမေးလ်များကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် click-through နှုန်းကိုရရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ ၆၀၀၀ ကိုသူတို့ပြောသင့်သည်။ 'အထက်ခန်းထက်ပိုသော' သီအိုရီသည်ဆက်လက်ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်ကို ဦး စွာဖွင့်သောအခါစာဖတ်သူများမြင်တွေ့ရသောအချက်အလက်များသည်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် scroll မလုပ်ပါဟုမဆိုလိုပါ။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ရယ်စရာကောင်းသောကြေညာချက်ကိုအထောက်အကူပြုရန်အချက်အလက်များမရှိဘဲ၊ Signals vs. Noise ဘလော့ဂ်၏စာဖတ်သူများသည်ယခုအချိန်တွင်၎င်းတို့ကိုယုံကြည်လာပြီးသတင်းအချက်အလက်၊ အသုံးဝင်သော၊ ပုံစံပြုထားခြင်းမရှိသောအီးမေးလ်များကိုရေးသားလိမ့်မည်။ အဖြေ
ကျွန်ုပ် Basecamp အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာအချက် (၃၇) ခုကိုကျွန်ုပ်မယုံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုအပေါ်မာနထောင်လွှားမှုရှိမရှိကျွန်ုပ်မသေချာသော်လည်းသူတို့၏တောက်ပမှုသည်တောက်ပနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏အသုံးချပရိုဂရမ်များ၏ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကိုနှစ်သက်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း application တစ်ခုလုံးသည်ယခင်ကပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းရှုခင်းကိုပြောင်းလဲနေပုံမရ။ ya နောက်မှ, 37 ကြည့်ပါ! ဒါဟာကြာရှည်နေစဉ်ဒါဟာပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖြစ်ချင်တော့, ငါ iGTD, desktop app ကိုပြောင်းလိုက်သည်။
Tags: အချက်ပြ ၃၇ ခုBasecamp
Google PageRank ၏နက်နဲသောအရာဖြေရှင်းပြီး
ဧပြီ 7, 2007 မှာ 6: 22 pm တွင်
ကျွန်တော်လည်း 37Signal ပို့စ်ကြောင့် စိတ်ဆိုးသွားတယ်။ ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံကိုလည်း ထိခိုက်စေတယ်။
ဧပြီ 7, 2007 မှာ 8: 58 pm တွင်
ကတိမတည်ဘဲ ဘလော့ဂ်တွေမှာ ကျိန်ဆိုဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ငါသဘောတူပါတယ်၊ ကတိမတည်ဘဲနဲ့ ခိုင်လုံတဲ့အချက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
200 signals ဘလော့ဂ်တွင် မှတ်ချက်ပေါင်း ၂၀၀ နီးပါးရှိသည်ကို သတိပြုမိသဖြင့် တုံ့ပြန်မှုရရှိရန် ၎င်းကို ထားရှိပုံရသည်။
ဧပြီ 7, 2007 မှာ 10: 14 pm တွင်
Stephen - သဘောတူတယ်။ ကတိကဝတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လေးစားမှုအပိုင်းတော့ နားမလည်ဘူး။ အရည်အချင်းနည်းနည်းဖြင့် သင်သည် တစ်စုံတစ်ဦးကို ထိတ်လန့်စေတတ်သေးသည်၊ ရိုးရိုးသားသားနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိနိုင်သော်လည်း လေးစားမှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဆဲဆိုခြင်းသည် ကုမ္ပဏီဘလော့ဂ်အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိစေမည်ကို ကျွန်ုပ် နားမလည်ပါ။
ဧပြီ 7, 2007 မှာ 10: 02 pm တွင်
ကျွန်တော် 37Signals ဘလော့ဂ်ကို ပုံမှန်ဖတ်ဖူးပေမယ့် အဲဒါနဲ့ နောက်ကွယ်ကလူတွေ အရမ်းစိတ်ပျက်သွားတယ်။ ထက်မြက်သူများ၊ ရိုးရှင်းမှုနှင့် အသုံးပြုသူအပေါ် အာရုံစိုက်ခြင်းအပေါ် ၎င်းတို့၏အာရုံစိုက်မှုကို ကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားပါသည်။ သို့သော် — သင်မှတ်သားထားသည်နှင့်ဆင်တူသည် — ဘလော့ဂ်ကို အလေးပေးမှုသည် သီးသန့်ဆန်ပြီး အကြွင်းမဲ့အာဏာဖြစ်လာသည် (“ငါတို့ပြောတာမှန်ပါတယ်၊ တခြားလူတွေအားလုံးက မိုက်မဲနေကြတာပဲ”)၊ ပြီးတော့ အဲဒါကို ရှုံ့ချပြီး စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။
IMHO၊ 37Signals များ၏နောက်ကွယ်မှလူများသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အသုံးများသည်ဟုထင်ရသောအရာတစ်ခုတွင်အရှုံးပေးခဲ့ကြသည်... ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအောင်မြင်သောကြောင့်၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းသည်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးလူတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းလမ်းများကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုကိုပုံတူပွားနိုင်သည်။
Hogwash ကံဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် မကောင်းသောအချိန်ကြောင့် တောက်လောင်ခဲ့သော ထူးထူးခြားခြား ထက်မြက်သူများနှင့် အံ့မခန်းကုမ္ပဏီများ အများအပြားရှိပြီး ကံကြမ္မာနှင့် အချိန်အခါကြောင့် အောင်မြင်သည့် အံ့အားသင့်ဖွယ် လူယုတ်မာများနှင့် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော ကုမ္ပဏီများလည်း ရှိပါသည်။ ယုတ္တိမရှိသော ဆက်စပ်မှုများနှင့် အကြောင်းရင်းများကို ယေဘုယျအားဖြင့် ယူဆသူများ အလွန်များသည်။
ပိုပြီး နှိမ့်ချတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုကို ပိုနှစ်သက်တယ်- ဒါက ငါတို့လုပ်ခဲ့တာ၊ ငါတို့ ကုမ္ပဏီက လုပ်ခဲ့တာပဲ… မင်းအလိုရှိတဲ့အရာကို ယူလိုက်ပါ။ သင့်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်နိုင်သလို သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်... သင်အသိဆုံးပါ။
ဧပြီ 7, 2007 မှာ 10: 09 pm တွင်
ဒီသင်ခန်းစာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုဟာ သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် ကောင်းချီးတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ကျိန်စာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သင်ဟာ အရူးတစ်ယောက်ဆိုရင်… သင့်ဘလော့ဂ်က အဲဒါကို ဖော်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လူတွေက လူရှုပ်နဲ့လုပ်ရတာ မကြိုက်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ရဲ့ လေသံက ကျွန်တော့်ကို သူတို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကို လှည့်စားစေခဲ့တယ်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက နောက်ဆုံးလကို ဖတ်ပြီး Getting Real စာအုပ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ သူတို့၏နှိမ့်ချသောအစပိုင်းတွင် လေသံသည် အလွန်ကွဲပြားသည်။
ဧပြီ 7, 2007 မှာ 11: 13 pm တွင်
သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေဟာ Basecamp ကို ဘယ်တုန်းကမှ မသုံးခဲ့ဘူး၊ အကောင့်ထဲကို ဘယ်တော့မှ အကောင့်မဝင်ဘူးဆိုတာကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 6: 26 AM
မင်းငါ့စိတ်ကိုဖတ်ပြီး ငါတတ်နိုင်တာထက် ပိုတိုတောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ ချရေးလိုက်တာနဲ့တူတယ်။
ငါလည်း 37s မှာ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်က စာရင်းသွင်းထားလို့ 'ငါတို့မှန်တယ်၊ တခြားသူတွေလည်းမှားတယ် - ငါတို့ကိုကြည့်တယ်၊ ငါတို့ စိတ်ကူးယဉ်တာပဲမဟုတ်လား' ဆိုတဲ့ သဘောထားကြောင့် ငါလည်း un-subscribed လုပ်ခဲ့တယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ တကယ်ပါ။ သူတို့ဟာ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူတွေဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 8: 48 AM
၎င်းတို့သည် ယခင်က Mark Hurst/Good Experience ကို ကိုးကားပြီး ၎င်း၏ Gel Conference တွင် ပြောခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ Good Experience သတင်းလွှာသည် ကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိသော အရှည်ကြာဆုံးအီးမေးလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းသည် စကားလုံးတိုင်းကို ဖြတ်သွားပါသည်။
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 10: 54 AM
အချို့အချက်များ- လေသံပြောင်းတာကို လုံးဝသဘောတူပြီး အဲဒါကိုလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော် နေ့တိုင်း SvN ကို စိတ်အားထက်သန်စွာ မဖတ်တာ သေချာပါတယ်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်သည် တန်ပြန်အချက်အချို့ကို တင်ပြလိုပါသည်။
1. အထူးသဖြင့် သင်သည် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို သီးခြား desktop အက်ပ်ဖြင့် အစားထိုးနိုင်လျှင် ပစ်မှတ် Basecamp ဖောက်သည်နှင့် တူမည်မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ သင့်ဖောက်သည်များ အကောင့်မဝင်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ PM လိုအပ်ချက်များကို အခြားနေရာများတွင် ဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
၂။ ငါစိုးရိမ်မိသလောက်၊ မင်းနေရာတိုင်းဖတ်နေတဲ့ အဖြူရောင်ဆေးကြောထားတဲ့ အညစ်အကြေးတွေထက် ရိုးရှင်းတဲ့အကြောင်းအရာကို ပိုလိုချင်ပါတယ်။
3. သူတို့မရှင်းလင်းဘူးလို့ထင်ရင်၊ ယေဘူယျအားဖြင့် အီးမေးလ်စျေးကွက်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ မှတ်ပုံတင်ခြင်း/မိတ်ဆက်အီးမေးလ်တွေကို ရည်ညွှန်းတာလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်များထဲမှ တစ်ခုသည် တတ်နိုင်သမျှ အမြတ်အစွန်းရရှိရန်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင် ပံ့ပိုးမှုလိုအပ်ချက်များကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူစိတ်ပျက်မှုကို လျှော့ချရန်ဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။ သူတို့ ဒီဟာကို ပို့စ်တင်နေတယ်ဆိုရင်၊ သူတို့ဆီ ပေးပို့တဲ့ အီးမေးလ်တွေကို အပြည့်အစုံ မဖတ်ဖူးသူတွေဆီက ပံ့ပိုးမှု တောင်းဆိုချက် အများအပြားကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ သူတို့ ဒီမှာ လိမ်ညာဖို့ ဘာမက်လုံးတွေ ပေးရမလဲ မသိဘူး။ ပြီးတော့ မင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုက ငါ့ကို *အနည်းငယ်* ခံစစ်အဖြစ်နဲ့ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူရဲ့ POV က ငါ့ကို ထိသွားစေတယ် (ငါမှားရင် ပြင်ပေးပါ)။
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 11: 33 AM
မင်္ဂလာပါ SirZ ကောင်းသောအချက်များအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တုံ့ပြန်ပါရစေ။
1. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားမျှဝေထားသော ပရောဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှု/ထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာကို ရှာမတွေ့မချင်း desktop အက်ပ်သို့သာ သွားခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များနှင့် မျှဝေရန် အပြင်တွင် ကောင်းမွန်သော အက်ပ်တစ်ခု ရှိမည်ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါသည် – Basecamp သည် ကျွန်ုပ်၏ ဖောက်သည်များ၏ တုံ့ပြန်မှုအပေါ် အကဲဖြတ်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။ အီးမေးလ်သည် လုပ်စရာများ၊ ပရောဂျက်ပန်းတိုင်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ စသည်တို့ကို ဆက်သွယ်ရာတွင် အဓိကနည်းလမ်းအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
2. အားလုံးက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက်ပါ ၊ ဒါပေမယ့် ကျိန်ဆိုစရာမလိုဘဲ မင်းရဲ့အမှတ်ကို ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ထောက်ပြချက်ကတော့ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ပါ။ လိမ့်မည် သင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် သင့်ကုမ္ပဏီကို နှစ်သက်သော လူအချို့ကို ဖယ်ထုတ်ပါ။ ရိုသေလေးစားမှု သက်သက်ပါ။
3. သင် လုံးဝမှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်မှုသည် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူအဖြစ် ခုခံကာကွယ်ပါသည်။ အိုင်တီလောကတွင် အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုများကို လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဟူ၍ အုပ်စုနှစ်စုခွဲလေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ ဆိုလိုရင်းမှာ Operational Emails များကို မရွှေ့သင့်ပါက၊ ထိုထင်မြင်ယူဆချက်အတွက် အခြေခံအချို့ကို ပေးသင့်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောရရင်တော့ မမှန်ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအပေါ်အခြေခံ၍ အဖြစ်မှန်သည် များစွာကွဲပြားပုံပေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ အတိုက်အခံကို ထောက်ခံရန် ခိုင်မာသော အချက်အလက် မရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ စာရင်းသွင်းပုံနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအီးမေးလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စုံလင်သော စခရင်ပုံများ၊ ဖော်ပြချက်များနှင့် အခြားသော ဒီဇိုင်းအလေ့အကျင့်ကောင်းများနှင့်အတူ ရှည်လျားသော ကော်ပီ HTML ကို အသုံးပြုရန် နေရာ။ စာရင်းသွင်းသူသည် ဆက်သွယ်ရေးကို အမှန်တကယ်ရရှိရန် မျှော်လင့်ထားသောကြောင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့်အီးမေးလ်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီးမေးလ်ထက် လှိမ့်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ် စောဒကတက်နိုင်သည်။
၎င်းသည် upsell နှင့် cross-sell အခွင့်အလမ်းများအတွက် အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးလည်းဖြစ်သည်။ သင်ပို့နေသည့် အီးမေးလ်၏ အကြောင်းအရာအပေါ် အခြေခံ၍ အပိုထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ကမ်းလှမ်းချက်များကို တန်ဖိုးထားနိုင်သည့် စေ့စပ်ထားသည့် သုံးစွဲသူတစ်ဦးရှိသည်။
ဧပြီ 16, 2007 မှာ 12: 40 pm တွင်
သင်ကိုယ်တိုင် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော အွန်လိုင်းဖြေရှင်းချက်ကောင်းတစ်ခု (သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု) သည် Copper Project ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး စျေးပိုကြီးတဲ့ အရသာသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အမှုတွဲများ၏ 90% တွင် Standard ဗားရှင်းသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိပါသည်။
Basecamp စမ်းသပ်မှုကို ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ဖောင်းပွမှုအားလုံးက ကျွန်တော့်ကို ယုံကြည်ဖို့ တွန်းအားပေးတဲ့ ကတိတွေအတိုင်း မလိုက်လျောခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်၏ ခရက်ဒစ်ကတ်ကိုလည်း ငွေပေးချေခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် ၎င်းတို့အား အခက်အခဲရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ နောက်ဆုံးတွင် ဆိုးရွားစွာ အထောက်အကူမပြုနိုင်ပါ။
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည် 37Signals အဘိဓာန်၏ အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ဤမျှကြီးမားသော PR နှင့် ယေဘူယျစိတ်ဆန္ဒ လှိုင်းလုံးကြီးကို စီးစီးနေသောကြောင့် ဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဒီဘလော့ဂ်နဲ့ တခြားသူတွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ သူတို့ရဲ့ ခံယူချက် ပျက်ပြားသွားပုံရတယ်။ စိတ်မကောင်းရုံပါပဲ။
ဧပြီ 18, 2007 မှာ 12: 52 pm တွင်
အပ်ဒိတ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ David Heinemeier Hansson သည် ကျွန်ုပ်ငြင်းခုံနေသော အကြွေးဝယ်ကတ် ကောက်ခံမှု နှစ်လကို အလွန်ကြင်နာစွာ ပြန်အမ်းခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်က လိုအပ်တာထက် ပိုခက်ခဲတယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ငါတို့ကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာ သူတို့နားလည်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ 37Signals သည် web2.0 လှုပ်ရှားမှုအတွက် ပိုစတာကလေးများ/ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာပြီး ထိုရုပ်ပုံသည် ညစ်ညမ်းသွားသည်ကိုမြင်ရသည်မှာ ရှက်စရာပင်။
ဤသည်မှာ အထူးသက်ဆိုင်ပုံရသော Cluetrain Manifesto မှ ဤအရာအချို့ဖြစ်သည်...
18 ၎င်းတို့၏စျေးကွက်များကို မသိနားမလည်သောကုမ္ပဏီများသည် ယခုအခါ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ချိတ်ဆက်နေကြပြီဖြစ်သောကြောင့် ရလဒ်အနေဖြင့် ပိုမိုထက်မြက်လာပြီး စကားပြောဆိုမှုတွင် ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လာခြင်းသည် ၎င်းတို့၏အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကို ဆုံးရှုံးနေပါသည်။
21 ကုမ္ပဏီများသည် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် မိမိတို့ကိုယ်ကို အလေးအနက်ထားရန် လိုအပ်သည်။ ဟာသဥာဏ်ရှိဖို့ လိုပါတယ်။
89 ငါတို့တွင် စစ်မှန်သော တန်ခိုးရှိသည်၊ ငါတို့သိ၏။ အလင်းရောင်ကို မမြင်ရရင်၊ အခြားဝတ်စုံအချို့က ပိုဂရုစိုက်၊ ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ကစားရတာ ပိုပျော်ဖို့ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
95 ငါတို့သည် နိုးကြား၍ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လျက်၊ ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါတို့မစောင့်ဘူး။
…နှင့် Nordstroms မှ…
ဖောက်သည်များနှင့်အတူ အရာများကို မှန်ကန်အောင်လုပ်ပါ သို့မဟုတ် သင်ကျန်နေလိမ့်မည်။
24:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 25 မှာ
သူ...ဒါဆို ကတိကဝတ်က ရိုးသားပြီး ကတိမတည်တာက မရိုးသားဘူးလား?
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 2: 07 pm တွင်
ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းတို့၏စာအုပ်ကတည်းက 37Signals ကိုယုံကြည်သူကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး မနှစ်က SXSW တွင် ၎င်းတို့၏အဓိကမိန့်ခွန်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ အဲဒါက ပြီးပြည့်စုံမှုထက် နည်းတဲ့ Basecamp ကို ရှာတွေ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲလို့ ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် နေ့တိုင်းသုံးနေတုန်းဘဲ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် desktop အက်ပ်တွေရဲ့ အတားအဆီးတွေကို ချိုးဖျက်မိလို့ စိတ်သက်သာရာရသွားမယ့်အစား ကြောက်လန့်လာတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ရဲ့ အသံနေအသံထားလောက်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ပုံမှန်စာဖတ်သူ တစ်ဦးသာဖြစ်လို့ မှတ်ချက်မပေးတတ်ပေမယ့် “ပရော်ဖက်ရှင်နယ်” ဆက်တင်မှာ ကျိန်ဆဲသူတိုင်းဟာ အမိုက်စား အမိုက်စားတွေနဲ့ ကစားဖို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြိုးစားနေတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ ကလေးတွေ။
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 2: 34 pm တွင်
သူတို့ရာထူးမှာ F-Bomb သုံးတာမြင်တော့ အံ့သြမိတယ်။ မှန်ကန်စွာ သင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် မူပိုင်ခွင့်အရ မလိုအပ်ဘဲ၊ နောက်ဆုံးတွင် အရွယ်မရောက်သေးသူသာဖြစ်သည်။ “အေးမြသော” အကြောင်းရင်းမှာ ဆန့်ကျင်ရေး ထူထောင်မှုဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ လွန်ခဲ့သည့် ကြာမြင့်စွာကပင် ပါးလွှာစွာ ဝတ်ဆင်လာခဲ့သည်။ SirZ ထောက်ပြခဲ့သလိုပဲ သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ဟာ အချည်းနှီးသက်သက်ပါပဲ၊ အားလုံးက သူတို့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ဘယ်သူကမှ မပြောရဲဘူးထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါက အထိုက်အလျောက်တော့ မဖြစ်ဘူး၊ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လက်ခံရမယ်။
သူတို့စာအုပ်က ကျွန်တော့်အတွက် ဟာသတစ်ခုပါ။ ရဲရင့်ခြင်းအတွက် သတ္တိရှိကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ စကားလုံးများ။ စင်စစ်အားဖြင့် လုပ်ငန်းအားလုံးတွင် ရှေ့ဆောင်အများစုသည် ပင်မရေစီးကြောင်းနှင့် မလည်ပတ်ကြသော်လည်း f-off သဘောထားသည် ရယ်စရာကောင်းပါသည်။ မဟုတ်ဘူး၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေဖို့ဆိုတာ အမြဲတမ်း စိတ်ကူးကောင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ရထားလမ်းအတွက် သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီကိစ္စအတွက် ချို့တဲ့မှုတွေကြောင့်လည်း အမြဲတမ်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ 37 Signals သည် Rails သည် ပင်မရေစီးကြောင်း သို့မဟုတ် "အောင်မြင်လွန်းသည်" ကို မလိုလားကြောင်းနှင့် Fanboy များသည် ၎င်းကို စားသုံးကြသည်ကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်…ကျောင်းအုပ်အဆင့်မှာ ကောင်းကောင်းနေနိုင်ပေမယ့် လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ကြည့်ရအောင်။ Ruby နှင့် အထူးသဖြင့် Rails developer များရင်ဆိုင်ရသည့် အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုရန်အတွက် အဆင်သင့်သတ်မှတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်၏ ရှားပါးမှုဖြစ်သည်။ Ruby မှာ PHP ဒါမှမဟုတ် Python မှာတောင် နေရာအနှံ့မှာ မရှိပါဘူး။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟာ ဝါသနာပါပေမယ့် ငွေရှာဖို့ပဲ အဓိကလုပ်ပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် ကိုယ်ဝါသနာပါတာကို လုပ်ခွင့်ရတာ ကံကောင်းပေမယ့် ဘေလ်ပေးချေပြီး ကလေးတွေကို ကျွေးမွေးဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ လူတွေကို ဒီလိုယုံကြည်မှု၊ အားထုတ်မှုနဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို တစ်ခုခုမှာ ထည့်ခိုင်းပြီး အဲဒါကို တတ်နိုင်သလောက် မအောင်မြင်စေချင်ဘူးဆိုပြီး သူတို့ကို ပြောခိုင်းတာ… ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့အသုံးပြုမှုရဲ့ အမြတ်အစွန်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေတယ်… ငါ့အတွက် ဟော့ဆေးနဲ့တူတယ်။
37 ရှေးရှေးတုန်းက အချက်ပြမှုများသည် hubris ကြောင့် အဆိပ်သင့်ခဲ့သည်။ ဒါကို လူတွေမြင်ဖို့ အချိန်ကြာလာတာကို ကျွန်တော် အံ့သြမိပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အတွက် အဓိကအားဖြင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး စက်တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေပါသည်။
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 2: 54 pm တွင်
နောက်ထပ်တစ်ခုပြောချင်တာက SirZ။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူအဖြစ် Karr ၏စွမ်းဆောင်ရည် မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၊ ကျွန်ုပ်သည် သူ၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ပြတ်ပြတ်သားသား အလွဲသုံးစားပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် သူ့အား လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့် အသိပညာနှင့် သင်ကိုယ်တိုင်အပါအဝင် အခြားသူများထက် ပိုမိုထိရောက်သည့်အရာများကို ခွင့်ပြုပေးပြီး 37 Signals ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါ။ ထင်မြင်ချက်တစ်ခုတည်းက မင်းကို ငွေမရှာဘူး၊ ရလဒ်တွေက မင်းကို ပိုက်ဆံဖြစ်စေတယ်... ပြီးတော့ Mr Karr ရဲ့နည်းလမ်းတွေက ရလဒ်တွေယူလာတယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေကို ဘယ်သူက လျှော့ပေးမလဲ။
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 2: 56 pm တွင်
သူတို့ဘလော့ဂ်ရဲ့ အသံနေအသံထားကို 'အားလုံးသိတယ်' နဲ့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့ တောင့်တဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကို သဘောတူပါတယ်။ အရမ်းနှောင့်နှေးလွန်းတဲ့ Highrise ရဲ့နိဒါန်းမှာ ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပြီး အဆင့်သတ်မှတ်မှုလွန်ကဲတယ်လို့လည်း ခံစားမိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ Basecamp အကောင့်ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း ဂရုတစိုက်ကြည့်နေသည်။
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 3: 35 pm တွင်
37signals များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကို အမှန်တကယ် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အရာတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့၏ Basecamp သုံးစွဲသူ 1,000,000 မားကတ်တင်း ကမ်ပိန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများမဟုတ်သော ရာခိုင်နှုန်းအများအပြားကို အပြုသဘောဆောင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်မရိုးသားပါ။
ကျွန်ုပ်တွင် အနည်းဆုံး မတူညီသော Basecamp အကောင့်4ခုရှိပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုကို ပြီးခဲ့သောလအနည်းငယ်အတွင်းသာ အသုံးပြုခဲ့သည်။ မင်း Doug လိုပဲ၊ ပရောဂျက်တစ်ခုစီမှာ အကောင့်မဝင်ဖူးတဲ့ အသုံးပြုသူ လက်တစ်ဆုပ်စာ ဒါမှမဟုတ် အဲဒါကို စစ်ဆေးဖို့ တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ်သာ အကောင့်ဝင်ထားတယ်ဆိုတာ ငါမြင်တယ်။
တိုက်ရိုက်သရုပ်ပြခြင်းမရှိသောကြောင့်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုစစ်ဆေးရန် လူအများအပြားသည် အခမဲ့အကောင့်အတွက် စာရင်းသွင်းကြပြီး အမှန်တကယ်အရာတစ်ခုခုအတွက် အသုံးမပြုတော့ကြောင်း သေချာပါသည်။
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 4: 50 pm တွင်
ဒါက တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်ပါ၊ သတင်းစာ စာရင်းသွင်းသူ အရေအတွက်ကို သတိရစေတယ်။) ဤပို့စ်အတွက် ကြီးမားသော တုံ့ပြန်မှုကို ကျွန်ုပ် အမှန်တကယ် အံ့သြမိပါသည်။ လူအနည်းစုက သူတို့ရဲ့ မကျေနပ်မှုတွေကို ထုတ်ဖော်ဖို့ ဖိုရမ်ကို စောင့်နေကြပုံပါပဲ။
BTW... ငါပြောခဲ့တဲ့ တခြားလူက မင်းပဲ။ 😉
Dharmesh Shah က
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 6: 03 pm တွင်
စိတ်ဝင်စားစရာအချက်များ။ ဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အလှည့်ကျရှုထောင့်ကိုကြည့်ရန် အမြဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည် (အွန်လိုင်းတွင် 37signals များအကြောင်းဖတ်သည့်အရာအများစုသည် တောက်ပသောချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်သည်)။
နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ Basecamp အကောင့်ကိုလည်း ပယ်ဖျက်လိုက်သည်၊ သို့သော် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်မဟုတ်ဟူသောအချက်နှင့် ပို၍သက်ဆိုင်ပါသည်။
37Signals- Business Bloat နှင့် Feature Bloat
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 10: 33 pm တွင်
Basecampe မှ အခမဲ့ (ပိုမိုရိုးရှင်းသော) TaskFreak သို့ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ပြောင်းခဲ့သည်။ ငါတို့က အဲဒါကို ချစ်တယ်၊ နောက်ပြန်မကြည့်ဘူး။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 4: 03 AM
၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သတိပေးသည်။ လနဲ့ချီပြီး မသုံးဖြစ်ဘဲ အမြဲသုံးချင်ပေမယ့် တစ်ခါမှမသုံးဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 9: 39 AM
ရှားရှားပါးပါး အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များ (နောက်ဆုံးဝင်ရောက်သည့်ရက်စွဲများဖြင့် သက်သေပြထားသည့်အတိုင်း) ဒီမနက် သူတို့ကို ဖုန်းဆက်ပြီး စောင့်ရမလား။ အံ့သြဖို့ကောင်းတာက သူတို့ (၄) ယောက်က NO လို့ ပြောကြတယ်။
PS၊ သူတို့ဆီ ကျွန်တော့်အီးမေးလ်
"f-word" အငြင်းပွားမှုတစ်ခုလုံးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
ပြဿနာက ငါသုံးနေတုန်း ကျိန်ဆဲတာကို ဖမ်းမိတာ
မင်းရဲ့ကိရိယာတွေနဲ့ သိမ်းထားဖို့ အရမ်းခက်ခဲတာကို ငါတွေ့ခဲ့တယ်။
BackPack ကိုအသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များ။
မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်သည် မကောင်းသောကြောင့် ပရောဂျက်/ဖောက်သည်တစ်ဦး လမ်းလယ်တွင် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။
ဆက်သွယ်ရေး (၎င်းတွင် BackPack သည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်)။
ဒီမနက် အလွတ်သဘော အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အခြားဖောက်သည်တွေအကုန်လုံးက အဲဒါကို ကျိန်ဆဲနေကြတာကို ထင်ရှားစေတဲ့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်က လွယ်ပါတယ်...
FYI၊ ကျွန်ုပ်/သူတို့၏ အရည်အသွေးအချို့-
- အီးမေးလ်နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် 'ပုံမှန်' ပရောဂျက်စီးဆင်းမှု ဆိုးရွားသည်/
မရှိပါ (HighRise ၏ cc-email ဖြစ်ပုံရသည်။
- ဆိုဒ်က အရမ်းနှေးတယ်။
- File-versioning သည် မလုံလောက်ဘဲ အခြေခံလွန်းသည်။
- ကိရိယာများသည် ကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ (စာရေးဘုတ်များ၊ နောက် ၁ နှစ်အကြာတွင်၊ friggin' meta-refresh ဖြစ်သေးသလား၊ ထို့ကြောင့် ရိုးရိုးဘရောက်ဆာ back ခလုတ်သည် အလုပ်မလုပ်ပါ)
- Writeboards၊ မင်းရဲ့ site ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအပိုင်း၊ buggy၊ ရိုးရှင်းတဲ့ formatting tools တွေကို ခံစားရပါတယ် (ဖောက်သည်တစ်ယောက်က ကျည်ဆံပါတဲ့စာရင်းတွေကို မှန်အောင်လုပ်ဖို့ နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ ငါ့ကိုပြောတယ်)
- နောက်ဆုံး ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ ငါအခုမှသိထားတဲ့အတိုင်း၊ data export က ရယ်စရာကောင်းတယ်။ WTF သည် XML တင်ပို့မှုကို ဂရုစိုက်သည်၊ သို့သော် ကျွန်ုပ်သည် ဖိုင်အားလုံးကို သီးခြားဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ စာရေးဘုတ်များကို သီးခြားစီသိမ်းဆည်းရန်၊ စသည်ဖြင့် ကျန်နေသေးသည်။"
မင်းက တစ်ချိန်က မျဉ်းကွေးထက် သာလွန်ခဲ့ပေမယ့် ဒါတွေက မြန်ဆန်တဲ့ အချိန်တွေဖြစ်ပြီး ရိုးရိုးသားသား စူးစမ်းစစ်ဆေးဖို့ အချိန်ရောက်ပြီလို့ ငါထင်ပါတယ်။”
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 10: 34 AM
"ငါတို့မှန်တယ်၊ တခြားသူတွေမှားတယ်" လို့ တစ်ခါမှ မပြောဖူးတဲ့ မှတ်တမ်းအတွက် "ငါတို့မှန်တယ်၊ တခြားသူတွေလည်း မှားတယ်"
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အကျိုးရှိသောအရာများကို ရိုးရှင်းစွာ မျှဝေပါသည်။ အားလုံးက မင်းအတွက် အဆင်ပြေရင် ကောင်းတယ်။ တချို့က မင်းအတွက် အဆင်ပြေရင် ကောင်းတယ်။ သင့်အတွက် တစ်ခုမှ အလုပ်မဖြစ်ရင် ကောင်းပါတယ်။ သင်ရှာသမျှတန်ဖိုးကို ယူ၍ ကျန်အရာများကို ချန်ထားခဲ့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာအုပ်မှ ဤအခန်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်လိုပေမည်။
"မင်းက အဖြူအမည်းအမြင်ကို အရမ်းယူတာ။"
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လေသံက အရမ်းမိုက်နေပုံရရင် သည်းခံပေးပါ။ ဆန္ဒရှိရှိ ဖြုန်းတီးနေခြင်းထက် ရဲရင့်သောလေဖြတ်မှုများဖြင့် အကြံဥာဏ်များကို တင်ပြခြင်းသည် ပိုကောင်းသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ပါသည်။ မောက်မာသော သို့မဟုတ် မောက်မာသောအဖြစ်မှ ထွက်ပေါ်လာပါက၊ ထိုသို့ဖြစ်ပါစေ။ “အဲဒါမူတည်တယ်…” နဲ့ အရာအားလုံးကို နှိမ့်ချတာထက် ဒေါသဖြစ်ချင်တာထက် ဒီစည်းမျဥ်းတွေကို ဆွဲဆန့်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကျိုးစားရမယ့်အချိန်တွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဤနည်းပရိယာယ်အချို့သည် သင့်အခြေအနေနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ မင်းရဲ့ တွေးခေါ်မှုနဲ့ စိတ်ကူးကို အသုံးပြုပါ။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 11: 24 AM
ပထမဆုံး - အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်မယ်လို့ မထင်ခဲ့မိဘူး။ သင့်စာအုပ်တွင် သင်ကိုးကားထားသော ငြင်းဆိုချက်ထက် ကျော်လွန်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဤပို့စ်တွင် လူအများပြောနေသည့်စကားကို နားထောင်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
မင်းရဲ့စာအုပ်ကို ကိုးကားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုးကားချက်တချို့ကို ငါတင်ပြမယ်။
1. မင်းမရှိသလိုပဲ။ မှန်ကန်သောဖောက်သည်များကို ငှားရမ်းပါ။.
2. သင်၏ သင့်ထုတ်ကုန်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သော ချို့ယွင်းချက်များ ရှိနိုင်ပါသည်။
3. Blog Wave ကိုစီးပါ။ အတက်အကျရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်၏မူရင်းပို့စ်တွင် ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း Getting Real သည် အချိန်၏စမ်းသပ်မှုကို ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်သည် အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ရဲ့အမြင်ကို ပြန်သုံးသပ်ဖို့ မင်းအဖွဲ့ကို ငါတကယ်စိန်ခေါ်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာ တကယ့်ကို ကြမ်းတမ်းပြီး တခြားသူတွေကို မအော်မငေါက်ဘဲ သွန်သင်ဆုံးမရာမှာ ကူညီနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 11: 19 AM
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည် ပံ့ပိုးမှုအတွေ့အကြုံကို အခြေခံ၍ 37S ဖောက်သည်ဖြစ်ခြင်းကို ရပ်လိုက်သည်။ Basecamp ပရောဂျက်အချို့ကို တည်ဆောက်ရာတွင် ပြဿနာရှိပြီးနောက်၊ ပရောဂျက်များကို ကျွန်ုပ်ထက် ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များက ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြသရခြင်းကို မေးမြန်းရန် စာရေးခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုမှာ “Hi Todd” ၏ လိုင်းတစ်လိုင်းဖြစ်သည်။ ပရောဂျက်သည် ပရောဂျက်နှင့်ဆက်စပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်" သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်အတော်လေးနီးစပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြို့ပတ်ရထား၊ အထောက်အကူမပြုသော၊ နှင့် မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာသော စစ်မှန်သော လိုအပ်ချက်၊ ၎င်းကို မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကို သိရန် (duh)။
ဒုတိယအကူအညီတောင်းခံမှုတစ်ခုသည် အလားတူကုသမှုတစ်ခုရရှိခဲ့သည် - "ဒါက ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲ" ဟူသော မျဉ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် အကူအညီတစ်စုံတစ်ရာမရှိသော လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ပံ့ပိုးကူညီမှုဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုမှ ဆော့ဖ်ဝဲတွင် အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုချက်အား အဖြေမရရှိပါ။
ငါ့အတွက် ယူသွားလိုက်တာက 'မင်းတို့ရဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ အဆင်မပြေရင် တခြားနေရာကို သွားလိုက်ပါ' ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံးတော့ အဲဒါတွေကို မရေးပါနဲ့ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ပါပဲ။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 12: 21 pm တွင်
Douglas၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်သည် 1999 ခုနှစ်ကတည်းက အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်း ပြောဆိုရန်အသုံးပြုသည့် တူညီသောအသံကို သယ်ဆောင်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အများသူငှာ ဆက်သွယ်မှုအတွက် လည်စည်းဝတ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မတီထွင်ပါ။ စင်ပေါ်မှာရော စင်ပေါ်မှာရော ငါတို့က ဘယ်သူတွေလဲ။ ငါတို့က ဆင်ခြေမပေးဘူး။ အဲဒါအတွက် ကျွန်တော်တို့ အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ လူတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက ဒီလိုမျိုး ပိုများစေချင်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးများကို မျှဝေပါသည်။ ဒါမှပဲ ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်း လုပ်စရာတွေ လုပ်ထားပြီး ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ အခြေအနေဘယ်လိုပဲရှိရှိ တခြားသူဖြစ်ရတာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်ရတာ ပိုကောင်းတယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျိန်ဆိုတယ်။ အကြီးကြီးပဲ။ တခါတရံ မင်းက ငါတို့ကို “အမိုက်စား” လို့ ခေါ်တယ်။ အကြီးကြီးပဲ။ နှောင့်ယှက်ခံရဖို့ အခွင့်အလမ်းရှာနေတယ်ဆိုရင် နှစ်ခုစလုံးက အညီအမျှ စော်ကားပါတယ်။
လူတိုင်းကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ မကြိုးစားခဲ့ဖူးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုပုံ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ တွေးခေါ်ပုံ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ပြုမူပုံကို မကြိုက်သည့်လူအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါသည်။ ရပါတယ်။ မင်းကို မကြိုက်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ရပါတယ်။ ဒါဟာဘဝပါ။
သင့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အကြံပြုချက်ရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် သင့်အတွက် တုံ့ပြန်ချက်ရှိပါသည်။ "လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်က မသိနားမလည်မှုနောက်ထပ်အပိုင်းတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။" နှင့်ပတ်သက်၍ http://www.37signals.com/svn/posts/357-people-dont-scrollemails
မှတ်ချက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သဘောတူသောသူများသည် မသိဘဲ ဖြစ်နေပါသလား။ ဒီလူတွေကို မသိလို့ ခေါ်ရတာ အဆင်ပြေလား ။ Richard Bird က မသိနားမလည်လို့လား။ Steven Bao က မသိနားမလည်လို့လား။ Ben Richardson က မသိနားမလည်လို့လား။ Amie Gillingham သည် မသိနားမလည်ပါ။ Dave Rosen က မသိနားမလည်လို့လား။ Concept Share မှ Scott Meade သည် မသိနားမလည်ပါ။ SquareSpace မှ Anthony Casalena လည်း မသိဘဲလား။ BlinkSale မှ Josh Williams သည် မသိနားမလည်ပါ။ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်မှာ မှတ်ချက်တစ်ခု ရေးတင်မလား။ ဒါမှမဟုတ် မင်းစကားနောက်မှာ ရပ်မနေဘူးလား။ မင်းပြောတာကို ဆိုလိုတာလား။
Ryan က ဒါကို ပို့စ်တင်တာ မသိလို့လား။
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှု၊ မျက်ကန်းမျိုးချစ်မုန်းတီးမှုစသည့် မှတ်ချက်များအတွက် “မသိဘဲ” ကို သီးသန့်ထားလိုပေမည်။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 12: 45 pm တွင်
ဟုတ်ပါတယ် အဲဒီလူတွေဟာ မသိနားမလည်ကြဘူး။ သင့်ဘလော့ဂ်မှာ ကြီးနိုင်ငယ်ညှဉ်း တရားစင်မြင့်တွေ သူတို့မှာ မရှိဘူး။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်အပေါ် အခြေခံ၍ ရိုးရှင်းစွာ မှတ်ချက်ပေးခြင်းနှင့် ထောက်ခံကြသည်။ Ryan က မသိနားမလည်ဘူး။ သူ့အမြင်ကိုလည်း ပေးတယ်။ ကျွန်တော် လေးစားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အချို့သူတွေအတွက်တော့ အဲဒီခံယူချက်က လက်တွေ့ပါပဲ။ ထိုလူများသည် ထိုနည်းစနစ်ကို စမ်းသပ်ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိသွားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
မင်းရဲ့ ပို့စ်ကို ထင်မြင်ယူဆချက်အဖြစ် မဖော်ပြဘဲ အမှန်အတိုင်း တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ နားမလည်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ယုံတယ်။ မောဟဟု သတ်မှတ်သည်။ သီးခြားအကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် အချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သော အသိပညာ သို့မဟုတ် အချက်အလက် ချို့တဲ့ခြင်း။. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု သို့မဟုတ် တစ်ယူသန်မှု စသည်တို့နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် Jason က တုံ့ပြန်ဖို့ မလိုပါဘူး။ မင်းရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို ကြည့်ပြီး ငါ့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေဟာ အားလုံးမှန်ပါတယ်။ လေသံပြောင်းသွားပြီ။ အဲဒါက သိပ်ဆိုးတယ်။ သင်နှင့် သင့်ကုမ္ပဏီ ကံကောင်းပါစေ။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 12: 42 pm တွင်
ဆဲဆိုခြင်းသည် ကိစ္စမဟုတ်ဟု ထင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်၊ သင့်လျော်သောအလေးပေးမှုကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ငါတို့က ကလေးတွေမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ဒီလိုပြောနေတာ။ အနည်းဆုံးတော့ ငါလုပ်တယ်။
ဒါပေမယ့် 37 Signals ဘလော့ဂ်က ကျွန်တော့်ကို ဟန်ဆောင်မှုဖြစ်စေတယ်။ ဒီလိုမျိုး “ဒီအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မင်းတို့အားလုံး ဘယ်လောက်မှားနေလဲဆိုတာ ငါတို့ သိခဲ့တယ်” ဆိုတဲ့ အသံမျိုး။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 1: 20 pm တွင်
ဒေါက်ဂလပ်၊ အခု မင်းဟာ အရှုံးသမားတစ်ယောက်လိုပါပဲ။ Jason က သူ့မှတ်ချက်တွေကို ထားခဲ့ဖို့ သင့်ဘလော့ဂ်ကို လာခဲ့ပြီး အခု မင်းက သူ့ကို မတုံ့ပြန်ဖို့ ပြောနေတာလား။ အဲဒါ ဘယ်လို ကလေးဆန်တဲ့ အပြုအမူမျိုးလဲ။
Jason ၏ ပို့စ်ကို အဖြစ်မှန်အဖြစ် ဖော်ပြကြောင်း အကြံပြုခြင်းဖြင့်လည်း သင်ရောက်ရှိနေပါသည်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို အခြေခံတဲ့ အမြင်ပါ။ ၎င်းသည် op/ed (အမြင်/အယ်ဒီတာ) အပိုင်းဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနပြုခြင်းသည် အမှန်ဖြစ်သည်။ Jason သည် သူ၏ ရာထူးကို သိပ္ပံနည်းကျ၊ သို့မဟုတ် အမှန်၊ သို့မဟုတ် သူ၏ အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်း၏ထင်မြင်ယူဆချက်မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာကိုမျှ ဆင်ခြင်မိလိမ့်မည် မထင်ပါ။
မဝေဖန်ခင်မှာ သူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက် ဒါမှမဟုတ် အမှန်တရားလား ၊ ဘာကြောင့် သူ့ကို ကြင်နာစွာ မမေးတာလဲ။ သူ မင်းကို ဖြေရတာ ကျေနပ်မှာ သေချာတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ပိုပြီးသိလာလိမ့်မယ်။ ယူဆချက်တွေကို ဖန်တီးနိုင်သလို အမှန်တရားကိုလည်း သိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လူတစ်ယောက်က မသိနားမလည်ဘူးလို့ ယုတ္တိရှိရှိ ငြင်းခုံနိုင်ပေမယ့် သူနဲ့သဘောတူတဲ့ တခြားသူတွေတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဘယ်သူအရင်ပြောလဲ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နေရာကပြောလဲ အရေးမကြီးပါဘူး။ အားလုံးသဘောတူကြတယ်။ မှတ်ချက်ပေးသူများသည် Jason ၏ရပ်တည်ချက်ကို ထောက်ခံကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့အားလုံးသည် ဥာဏ်ပညာရှိကြသည် သို့မဟုတ် မည်သူမျှ မသိနားမလည်ကြဟု သင်ယုံကြည်သည်။ အားလုံးသဘောတူရင် ချယ်ရီရွေးလို့မရဘူး။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 2: 20 pm တွင်
1. Re: Sore Loser – Sore? ဟုတ်ကဲ့။ ယခင်ဖောက်သည်တစ်ဦးအနေနှင့် ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုအချို့ကို ယူဆောင်လာစေရန် ပို့စ်တစ်ခုရေးခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သို့လာရောက်ကာ ၎င်းတို့အား ပယ်ချခဲ့သည်။ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ မှတ်ချက်ပေးသူတိုင်းကိုလည်း ပယ်ချပါတယ်။ အဲဒါ ကံဆိုးလိုက်တာ- ကျွန်တော် ပိုမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ကံဆိုးသူ? ဟုတ်ကဲ့။ အသုံးမပြုနိုင်တော့တဲ့ tool တစ်ခုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရင်း အချိန်နဲ့ငွေ ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။
2. Jason က ဒါဟာ ထင်မြင်ချက်လို့ ပြောခဲ့ပြီး သူ့စာအုပ်ရဲ့ အခန်း 1 က ဘလော့ဂ်ဟာ ထင်မြင်ချက်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ငါ့ သဘောပေါက်ခြင်း (ဒါက ကျွန်တော့်အမြင်) ကွဲလွဲပြီး ကျွန်တော်အဲဒါကို ဖော်ပြခဲ့တယ်။
3. Jason က ဒီနေရာမှာ ထင်မြင်ချက်လို့ ပြောခဲ့တယ်၊ သူ့ကို မေးဖို့ မလိုပါဘူး။ အပြင်ထွက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းသည် ဤပို့စ်သည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမဟုတ်ကြောင်း သတိရပါ - ၎င်းသည် SvN အပေါ် လေးစားမှု ဆုံးရှုံးသွားခြင်းအပြင် ကျွန်ုပ်အား ထွက်ခွာရန် ဦးတည်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို မသုံးဘဲ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ တစ်ခုတည်းသော ပွဲမဟုတ်ပါ၊ အများကြီးပါ။
4. Re: Ignorance: မင်းက ငါ့ရဲ့အငြင်းပွားမှုကို သတိမထားမိဘဲ ထောက်ခံနေတာ။ အကယ်၍ SvN သည် အီးမေးလ်တစ်စောင်ကို မည်သူမျှ မလှန်နိုင်သော စောင်မထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကို ထုတ်ပြခဲ့ပါက၊ ၎င်းကို ဤနည်းဖြင့် တင်ပြမည်ဆိုပါက ယခုလူများက ၎င်းကို ဖြစ်ရပ်မှန်အဖြစ် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ SvN သည် ထိုတင်ပြချက်အတွက် မသိဘဲ၊ ထောက်ခံသူများ မဟုတ်ပါ။ သတင်းမှားဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မသိနားမလည်ပါ။ SvN ၏ သီအိုရီကို ကျွန်ုပ်စိန်ခေါ်ရခြင်းမှာ အတိအကျပင်ဖြစ်ပါသည် - ဘလော့ဂ်များသည် ၎င်းတို့၏ 'ထင်မြင်ယူဆချက်များ' ကို အဖြစ်မှန်အဖြစ် တင်ပြသောအခါတွင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 1: 41 pm တွင်
အချို့သောလူများသည် မောဟကို မသိဘဲနေပုံရသည်။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 2: 25 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Lupe။ အဖြေအားလုံးအတွက် ဝီကီပီးဒီးယားကို မကြည့်ပေမယ့် ကိုးကားချက်ကို သဘောကျပါတယ်-
အခြားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအရ မောဟသည် မိမိလိုအပ်ချက် သို့မဟုတ် ယုံကြည်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အချို့သော အချက်အလက်များနှင့် အညီ ပြုမူခြင်း သို့မဟုတ် ပြုမူခြင်းမပြုရန် ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဒါက ကျွန်တော့်အမြင်အရ၊ SvN မှာရှိတဲ့ Email Scrolling blog post က ဘာကြောင့် နားမလည်တာလဲ။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏သီအိုရီကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် ခိုင်လုံသောအချက်အလက်များကို စုံစမ်းရန် သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးရန် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ တကယ်တော့၊ သူတို့က သူတို့ရဲ့ အီးမေးလ်ဖော်မတ်အသစ်ကို ပလပ်ထိုးကတည်းက သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 2: 04 pm တွင်
မင်းရဲ့အမြင်ကို ငါထောက်ခံပါတယ်... ပြီးတော့ ဒါက American Express မှာ ငါ့ရဲ့နေ့ရက်တွေဆီက နောက်ထပ်သိကောင်းစရာတစ်ခုပါပဲ - "အသုံးပြုသူများ မလှိမ့်ရ" သီအိုရီကို စမ်းသပ်ရန်။ ကျွန်ုပ်တွင် မတူညီသော URL များကို အီးမေးလ်၏ထိပ်တွင် လင့်ခ်များဖြင့် ကုဒ်လုပ်ထားသော လင့်ခ်များနှင့် အောက်ခြေရှိ လင့်ခ်များ ရှိပါသည်၊ ကောင်းပြီ၊ “ခေါက်အောက်”။ အောက်ခြေက တွေကို နှိပ်သလို အပေါ်ဆုံးက တွေကိုလည်း နှိပ်ထားတယ်။ ၎င်းသည် အကြောင်းအရာ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆက်စပ်မှုကို ပြောပါသည်။ သင့်အကြောင်းအရာနှင့် မသက်ဆိုင်ပါက၊ အသုံးပြုသူသည် ပထမဆုံး ဖန်သားပြင်အတွင်းမှ သိပြီး ထို့ကြောင့် နောက်ထပ်ဖတ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ ကြော်ငြာများ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့် လုပ်ငန်းငယ်များအတွက် လုပ်ပုံလုပ်နည်းများပါရှိသော ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်များသည် ကြော်ငြာများ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြုလုပ်မည့်အစား အီးမေးလ်များ၏ 70% အထိ ကောင်းသောပမာဏကို အမြဲတွေ့မြင်ခဲ့သည် (ဆိုလိုသည်မှာ XNUMX% အထိ အီးမေးလ်အောက်ခြေရှိ လင့်ခ်များမှလာပါသည်။
ကျွန်တော်သည် client ပရောဂျက်တစ်ခုအတွက် basecamp ကိုလည်း ကြိုးစားခဲ့ဖူးပြီး စာရွက်စာတမ်းများစွာကို စာကြည့်တိုက်/သိုလှောင်ခန်းသို့ ပို့စ်တင်နေစဉ်တွင်၊ client ကို ၎င်းအစား google စာရွက်စာတမ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါသည်။ သင့်မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 3: 39 pm တွင်
အီးမေးလ်တစ်ခု၏ကြာချိန်နှင့်ပတ်သက်၍ လျစ်လျူရှုသူတစ်ဦးကို အဘယ်ကြောင့်ခေါ်ဆိုသနည်း။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်အတွက် တော်တော်လေးနက်တဲ့ စကားတွေပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို မကြိုက်ရင် အဲဒီအကြောင်း ရှည်လျားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို ရေးပြီး လူတွေရဲ့ မသိနားမလည်မှုကို ထောက်ပြတဲ့ မင်းရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ စွဲလမ်းမှုအပေါ် အာရုံစူးစိုက်မှု ဆွဲငင်ဖို့ ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလဲ။ အဲဒါကို ကျော်နေပြီ။
သင်သည် လူတစ်ဦးအပေါ် သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အတွေ့အကြုံမှ အမှတ်အသားပြုခြင်းအတွက် ကြီးမားသော စိတ်ဆင်းရဲမှုကို လုပ်နေသည် ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ပိုကြီးတဲ့လူဖြစ်အောင် ဆက်လုပ်ပါ။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 3: 51 pm တွင်
ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေပြီးသားဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 6: 23 pm တွင်
မင်းစိတ်​ထဲကလူ​တွေလား?! ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ဝန်ထမ်းများအား အီးမေးလ်များကို များများသုံးမည့်အစား အချိန်ပိုနည်းစေမည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေရာတွင် စွမ်းအင်များစွာကို မြှုပ်နှံထားပါသည်။ ပန်းတိုင်ရောက်ရန်- အီးမေးလ်များသည် လက်ရှိအချိန်တွင် ထိန်းချုပ်၍မရသော အနှောင့်အယှက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အီးမေးလ်အတိမ်အနက်သည် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အဘယ်ကြောင့် အဆိုပြုသနည်း။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 6: 47 pm တွင်
ဝန်ထမ်းများသည် အီးမေးလ်တွင် အချိန်နည်းပြီး ဖုန်း သို့မဟုတ် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် အချိန်ပိုပေးခြင်းသည် ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်ဟု ကျွန်ုပ်သဘောတူပါသည်။
ကျွန်တော့်မှာရှိနေတဲ့ အီးမေးလ်တွေရဲ့ ပမာဏကို ထက်ဝက်လောက် ဖြတ်ချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီအီးမေးလ်တွေရဲ့ အရှည်ကလောက် ဖြတ်ပြီး ခြောက်မသွားပါဘူး။ ကော်ပီရှည်နှင့် ကော်ပီတိုတိုကူးရန် ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များရှိသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။ html နှင့် စာသား စသည်တို့
စာဖတ်ဖို့ အချိန်ကုန်ချင်ရင် စာချုပ်တွေနဲ့ တခြားတရားဝင် mumbo jumbo တွေကို ဖယ်လိုက်ကြရအောင်။ အဲဒီစာရွက်စာတန်းက အချိန်အများကြီး ပိုကုန်ပြီး အဲဒါကို ပုံဖော်ဖို့ ရှေ့နေတွေကို ပေးဆောင်ဖို့ တစ်နာရီကို အများကြီး ပိုကုန်ကျပါတယ်။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 8: 29 pm တွင်
ကောင်းပြီ၊ ပရောဂျက်တစ်ခုတွင် basecamp ကိုအသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏အသင်းဖော်တစ်ဦးမှ မ၀ယ်ယူပါ။ ပရောဂျက်ရဲ့ ကော်ပိုရိတ်သဘောသဘာဝဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ထူးထူးခြားခြား interface ကို နားလည်ဖို့ အချိန်ပေးချင်ပေမယ့် ကျွန်တော့်အဖွဲ့ထဲက လူအများစုကတော့ မဟုတ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
မှတ်တိုင်များကို ပြောင်းလဲရန်မှာ အမှန်တကယ် ခက်ခဲပြီး အချို့သော အလုပ်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မှီခိုနေပါက၊ သင် လွတ်သွားသော အရာအချို့ကို လွတ်သွားပါက အလုပ်များကို ပြန်လည်စီစဉ်ရန် နည်းလမ်းမရှိတော့ပါ။
အခမဲ့ဗားရှင်းကို အသုံးပြုပြီး အခပေးဗားရှင်းကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ ခဏကြာပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည် whiteboard စသည်တို့ကိုအသုံးပြုပြီး တစ်ဦးတည်းသော IM စနစ်၏ အခြားအင်္ဂါရပ်များ (အခြားသူတို့၏ထုတ်ကုန်တစ်ခု) ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ပိုင်းပရောဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာအဖြစ် basecamp နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုသည် ဆိုးရွားစွာမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ အင်တာဖေ့စ်သည် တမူထူးခြားပြီး အလွန်တသမတ်တည်းမဟုတ်ပါ (လွန်ခဲ့သော 8 လကတည်းက - ကျွန်ုပ်သည် မကြာသေးမီကမှ အကောင့်မဝင်ရသေးဟု ထင်ပါသည်)
သူတို့ဟာ သူတို့ကိုယ်ပိုင် koolaid ကို အလွန်အကျွံ မြည်းစမ်းနေကြတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒီလမ်းတစ်ခုလုံး ဒါမှမဟုတ် အဝေးပြေးလမ်းဟာ ရေရှည်မှာ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ငါဆိုလိုတာက မင်းရဲ့ဖောက်သည်တွေကို အရင်ဦးစားထားချင်ယောင်ဆောင်ရင် မင်းသူတို့ကို အလှည့်တိုင်းလိုလို နှိမ့်ချပြီး အရာရာတိုင်းကို အမှန်အတိုင်းသိပြီး ကျန်လူတွေအားလုံးက ကျပ်မပြည့်တဲ့လူဖြစ်နေသလိုပဲ၊ ?
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 9: 27 pm တွင်
"f-ဗုံး" လား။ ဘာကြော်ငြာလဲ **che။
37signals တွေက ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ မျက်လုံးတောက်တောက်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ a***s တွေကို နမ်းဖို့ မရှာတော့ဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။
စိတ်မပူပါနဲ့… 37signals တွေက ခေတ်မမီတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဧပြီ 9, 2007 မှာ 9: 54 pm တွင်
အို ဖရန့် “ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ လိပ်” – အဲဒါက ကျွန်တော့်ကို ရယ်မောစေတယ်။ တည်းဖြတ်မှုများကို ခွင့်လွှတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ အခြားစာဖတ်သူများမှာ ဟာသကို သဘောပေါက်မည်မဟုတ်ပါ။
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 4: 44 AM
ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးအလုပ်ရှင်နှစ်ဦးစလုံးတွင် Basecamp ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Jason Fried &co သည် အလွန်ဟန်ဆောင်တတ်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရလျှင် ၎င်းတို့၏အက်ပ်များအားလုံးသည် အနည်းငယ်ကွဲပြားသော backward UI ဖြင့် တူညီသောဒေတာဘေ့စ်ကို ဖုံးကွယ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အကြောင်း တိုင်ကြားနေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်သည် basecamp ၏ အကြီးမားဆုံး အသုံးပြုသူလည်း ဖြစ်သည်။ “ဒါအတွက် စာရွက်စာတမ်းက ဘယ်မှာလဲ” လို့ မေးလေ့ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ငါက "Basecamp မှာ... အဲဒါ ဘယ်ကပိုင်လဲ... ဟုတ်တယ်မလား?" နောက်ဆုံးတော့ ဒုတိယတစ်ခုက ကျွန်တော့်ကို local wiki တစ်ခု ထူထောင်ခိုင်းတယ်။ အများကြီး ဘလော့ဂ်ဖော်မတ်ချထားသော အချက်အလက်သိုလှောင်မှုတွင် အသိပညာရရန် ပိုမိုခက်ခဲသောကြောင့် ပို၍အသုံးပြုရပုံရသည်။ 🙂
အလွတ်တန်းစလုပ်ကတည်းက၊ လိုအပ်လာချိန်ကိုစောင့်ရင်း ဘေ့စ်စခန်းအကောင့်တစ်ခုသွားကာ အကောင့်ဖွင့်သင့်သည်ဟု ကျွန်တော်ဆက်တွေးနေမိသည်။ မလိုအပ်သေးပါဘူး… အခုမှဖြစ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 5: 03 AM
ဒါကို ကျွန်တော် လုံးဝသေချာမသိပေမယ့် f-word-usage က ဒီစကားလုံးကို အလွန်အကျွံသုံးတဲ့ Snakes onaPlane ရုပ်ရှင်က အနည်းငယ် လှုံ့ဆော်မှု ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ရုပ်ရှင်ကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် “မြွေပေါ်မှ af******g လေယာဉ်” ဟု ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။
ဝဘ်ပေါ်တွင် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဝဘ်ပေါ်တွင် ကျိန်ဆဲနေသူများကို ကျွန်ုပ် စိတ်မ၀င်စားပါ။ မဟုတ်ရင် လျစ်လျူရှုလိုက်ရုံပါပဲ။
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 7: 30 AM
24 ရက်နေ့မှာ တစ်မိသားစုလုံးအတွက်ကတော့ သူတို့ကျိန်စာတိုက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ Agent Bauer က ထိုစကားစုကို သုံးတိုင်း Agent Bauer အသုံးပြုတိုင်း ကောလိပ်ကျောင်းသားအချို့ကို အရက်သောက်ရန် တွန်းအားပေးသည့် တစ်ခုတည်းသော စိတ်ကျေနပ်မှု၏ တစ်ခုတည်းသော အသုံးအနှုန်းမှာ "Damn it" ဖြစ်သည်။
ဒီအကြောင်းကို စာရေးဆရာတွေက သိလိုက်တဲ့အခါ သူတို့လေးတွေ3ချက်ဆက်တိုက် ရိုက်ချက်ထုတ်တာကို မြင်ရုံနဲ့ "မိုက်တယ် မိုက်တယ်" ဆိုတဲ့ စာကြောင်းတွေကို စတင်ကျွေးပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးမှုမှာ ရယ်စရာတွေ ပြန်ပေါ်လာဖို့ သက်သက်ပါ။.
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 8: 51 AM
"အမှန်တကယ်ရယူခြင်း" နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်မှုသည် အချိန်မတန်သေးသော်လည်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်လာသည်- ၎င်း၏ဆောင်ပုဒ်မှာ 37signals ဖြစ်ရန်နှင့် မလျှော်ရသေးသော PDF ကို 19 ဒေါ်လာဖြင့် ရောင်းချခြင်းသည် အလွန်မိုက်ပါသည်။
ORGware ကို စောင့်ကြည့်ပါ။
ကြေငြာချက်တစ်ခုအတွက်၊ soooon။ သင်ရှာဖွေနေသော အရင်းအမြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ပါ။
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 9: 09 AM
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 9: 46 AM
F*** မင်း Douglas Karr. မင်းက ရယ်စရာကောင်းလောက်အောင် သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ပစ်ချလိုက်တဲ့ အကြောင်းရင်းက 'f-bomb' ကို တစ်မိနစ်လောက် မယုံဘူး။ သင်သည် ဆောင်းပါးအများစုကို ၎င်းမဟုတ်ကြောင်း ယုံကြည်စေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ အနည်းအကျဉ်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသာမြင်သာသော 'စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ' ဘလော့ဂါတစ်ဦးကို စိတ်မ၀င်စားဘဲ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိလာပါက သူ၏စိုးရိမ်မှု၏ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလိမ့်မည် ဟု ကျွန်ုပ် ထင်ပါတယ်။
'စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ' အနေဖြင့် သင်သည် မြွေဆီအရောင်းသမားတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်။ ပြောနိုင်သလောက်တော့ မင်းက တော်တော်ဆိုးတယ်။
F*** မင်း Douglas Karr. မင်းလည်း တကယ်ကိုမိုက်နေပုံပဲ။
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 12: 55 pm တွင်
ငါတကယ်မိုက်နေတာလား။ Dang၊ ဒါ ငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံပဲ။
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 2: 03 pm တွင်
အင်း… ဒီပြန်ကြားချက်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်က သူ့ဘာသာသူ ပြောနေတာလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
Doug ၏ဘလော့ဂ်ကို အချိန်အတော်ကြာ စာဖတ်သူအနေဖြင့် သူသည် မိုက်မဲသည့်အဖြစ်ကို တစ်ခါမျှ မကြုံဖူးကြောင်း ပြောရန် ရင်ဖွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Jeez၊ ငါ 37signals ထဲကိုမရောက်ဖူးပေမယ့် ရန်လိုတဲ့နည်းလမ်းကနေ နောက်ထပ်ရှာဖွေလိုတဲ့ဆန္ဒကို အတိအကျဆွဲမထားပါ။
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 9: 59 AM
@John Beeler : ဒီ taskfreak က တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ မင်းသိပါတယ်။ rails အက်ပ်များအားလုံးသည် တူညီလုနီးပါးတွင် အဘယ်ကြောင့် ပြင်းထန်သော အသုံးပြုနိုင်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ရှိနေသည်ကို ကျွန်ုပ် အံ့သြမိပါသည်။ (ဒါဆို DHH သို့မဟုတ် အခြားရဟန်းမင်းတစ်ပါးက မင်းကို ဒီလိုပြောထားလို့ပဲ "ယူ" ရမယ်၊
ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု @defenders- SvN နှင့် ဤကော်ပို-ဘာသာဝင်များ၏ အခြားသူများသည် အခြေခံအားဖြင့် လူတို့အား ပြောဆိုနေကြပါသည်။ D.Karr မှာ အမှတ်ရှိလား။ ပံ့ပိုးပေးသော အချက်အလက် သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းသည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။ ဟုတ်ကဲ့၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအီးမေးလ်တွေအတွက်၊ အဲဒါတွေကို တိုတိုရှင်းရှင်းနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် ကူညီပေးတဲ့အချက်ကို မြင်နိုင်ပေမယ့်၊ မှတ်ပုံတင်ရေးအီးမေးလ်တွေဟာလည်း အရေးကြီးသလို လူတွေက အဲဒါကို အခြေခံပြီး ဦးစားပေးစဉ်းစားဖို့ လုံလောက်တဲ့ အသိဥာဏ်ရှိပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ကျွန်ုပ်သည် မှတ်ပုံတင်ထားသော အီးမေးလ်ကို လက်ခံရရှိသောအခါတွင်၊ hosting ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ပြောပါ၊ ၎င်းသည် ၃ စာမျက်နှာရှည်သည်၊ ပြဿနာမရှိပါ၊ မတူညီသောအီးမေးလ် ၄ စောင်ကို ကျွန်ုပ်အား အကောင့်ဖွင့်ထားသည်ဟု မပြောလိုပါ၊ နောက်တစ်ဦးသည် ကျွန်ုပ်အား ကျွန်ုပ်၏ shell id ကိုပြောပြပြီး နောက်တစ်ယောက်အား ကျွန်ုပ်အား ပြောပြလိုပါသည်။ အကူအညီနဲ့ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုက ဘယ်ကနေရှာရမလဲ၊ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော့်အကောင့်ကို စီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက် webgui ဆီကို url ကို ပြောပြတယ်။ အဲဒါက အရမ်းမိုက်လွန်းတယ်။
37S နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ပြီး Rails နှင့် SvN နှင့် ၎င်းတို့ပံ့ပိုးပေးသော အခြားခရိုနီများ (TextDrive နှင့် Textmate မည်သူမဆို?) မှတဆင့် စိမ့်ဝင်ကာ အဆိုပါလုပ်ငန်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်များကို မထုတ်ဖော်ဘဲ တွန်းအားပေးခြင်းဖြစ်သည်။
Rails သည် ခြောက်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ၎င်းသည် ကြောက်စရာကောင်းသော ဟာသတစ်ခုဖြစ်သည်။ အက်ပ်တိုင်းသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မူဘောင်၏ မိတ္တူ လိုအပ်သည်။ ဒီအကျိုးဆက်တွေကို မင်းသဘောပေါက်လား။ RailsDay2006 အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ ထည့်သွင်းမှု ရာဂဏန်းသည် 1.5 GB နီးပါး နေရာယူမည်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ DRY နိယာမ၏ အဆိုးရွားဆုံး ချိုးဖောက်မှုဖြစ်သည်။
Josh Charles ၊
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 1: 30 pm တွင်
ဒီနေရာမှာ ဆွေးနွေးစရာတွေ အများကြီးရှိနေပြီလို့ မြင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ နှစ်ဆင့် ထပ်ထည့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျိန်ဆဲခြင်းကို ငါဂရုမစိုက်။ စိတ်ကူးကို တကယ်ကြိုက်တယ်။ အချို့သော စကားလုံးများသည် အခြားသူများထက် ပို၍ ရိုင်းစိုင်းသော အတွေးအမြင် တစ်ခုလုံးသည် အလွန်မိုက်မဲပါသည်။
ဒါပေမယ့် အဲဒါက အဓိကပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ SvN တွေဆီက ပြဿနာကို ငါသေချာမြင်ရတယ်။ တစ်ခုခုပြောရင် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြောပြီး သာမန်ဖြစ်ပုံရတဲ့ s*** ကို နှိမ့်ချမနေပါနဲ့။ တစ်ခုခုကို ယုံရင် ဒီလိုပြောပါ၊ တခြားမပြောနဲ့။
ဒါပေမယ့် ဒီအခြေအနေမှာ လွဲနေတယ်ထင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ထပ်ထည့်မယ်။ တစ်ခုခုမှားခဲ့တယ်ဆိုရင် ဝန်ခံပြီး ရှေ့ဆက်လိုက်ပါ။ မှားတာ ဆိုးတာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ နည်းနည်းတော့ ထိတ်လန့်နေနိုင်ပေမယ့် မှန်တာကိုရှာရတာ အရမ်းတန်ပါတယ်။ 'ငါတို့မှန်တယ်၊ ဒါပဲ' ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ ဆင်ခြင်မှုလမ်းကြောင်းကနေ ထွက်သွားပြီး အယူဝါဒလောကထဲကို ဝင်သွားပါပြီ။ SvN တွေက ဒီလိုလုပ်တယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ထင်ရှားသည်မှာ၊ သူတို့သည် သူတို့လုပ်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ထင်မြင်ယူဆကြပြီး ၎င်းတို့အတွက် ကောင်းမွန်သော အလုပ်ဖြစ်သည်။
ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်သင့်တယ်ထင်တဲ့ သင့်မူရင်းပို့စ်မှာ သင်ရေးထားတဲ့ နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကတော့ ဖိုင်ကို အရန်သိမ်းဆည်းဖို့ အချက်အလက်မပါဘဲ အခိုင်အမာပြုလုပ်ခြင်းပါပဲ။ ဒေတာရရှိနိုင်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သာမာန်အသိသည် သာမန်မဟုတ်သလို၊ အတွေ့အကြုံက ကျွန်ုပ်တို့ကို သွန်သင်ပေးထားသည့်အတိုင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်း အလွန်မှားနိုင်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်မေးနိုင်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ "ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါက အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ထင်ဟပ်နေသလား (အဲဒီမှာ ဒေတာရှိလား)"
basecamp ကိုသုံးဖို့ ကျွန်တော်နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့လူတွေကို မရနိုင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Basecamp ရဲ့ ပြဿနာဟုတ်မဟုတ် သေချာမသိပါဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် လူအများစုက အဲဒီစွမ်းရည်မှာ အွန်လိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို သုံးဖို့/အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာ သေချာပါတယ်။ သေချာတာပေါ့၊ လူတွေက အီးမေးလ်နဲ့ တခြားအပလီကေးရှင်းတွေကို တကယ်မစဉ်းစားဘဲ သုံးကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို အသုံးပြုဖို့ အဆက်မပြတ် စစ်မှန်တဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်၊ သင်က အဲဒါကို မလိုက်နာရင် သဘာဝမကျဘူးလို့ ထင်လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ဒီမှာက ဆရာ/မတွေက အဲဒါကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ယခုရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ ရှိခြင်းအတွက် ရိုးရှင်းစွာ အသုံးမချတော့ဘဲ ၎င်းတို့ကို အမှန်တကယ် လေ့လာရန် အချိန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။
မှ Ian Smith
ဧပြီ 11, 2007 မှာ 9: 19 AM
Basecamp ကို ဖောက်သည်တစ်ဦးထံ တစ်ခါရောင်းရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့သည် စစ်ဆေးပြီးနောက် *လက်စွဲစာအုပ်* ကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဧပြီ 11, 2007 မှာ 12: 25 pm တွင်
Douglas - အကယ်၍ သင်သည် ကျိန်စာကင်းသော HTML-အီးမေးလ်သုံးနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှာဖွေနေပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အရောင်းထုတ်ကုန်ကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်- http://LeadsOnRails.com. ဒက်စတော့အက်ပ်မဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် သင်ကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့ အသုံးပြုသူများ၏ အမှန်တကယ် နားထောင်နေသည့် လက်တွေ့ကမ္ဘာဖောက်သည် အကြံပြုချက်မှ တည်ဆောက်ထားဆဲဖြစ်သည်။
ဧပြီ 11, 2007 မှာ 3: 11 pm တွင်
37s နဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကတော့ DHH လို့ထင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်ခန့်က သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်တွင် ပို့စ်တစ်ခုတင်ခဲ့သည် (loudthinking.com) အဓိကအားဖြင့်တော့ startup တစ်ခုနှင့် Rails ကိုအသုံးပြုခြင်းထက် 9-5 အလုပ်ကို ပိုလုပ်လိုသော မည်သည့်ပရိုဂရမ်မာမဆို အတိအကျ ရေးထားသည်။ ၎င်းသည် တူညီသော သွယ်ဝိုက်သောသဘောထား (ဝဘ်ပို့စ်တစ်ခုမှ ကောက်ချက်ချနိုင်သလောက်)- ကျွန်ုပ်နှင့် သဘောမတူပါက သင်သည် လူမိုက်ဖြစ်သည်။
ဧပြီ 22, 2007 မှာ 7: 11 pm တွင်
ကောင်းသော post ကို။
ဒီပို့စ်ကို လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က တွေ့ဖူးတာ မှတ်မိပေမယ့် ဒေါသမထွက်တော့ဘူး။ အဲဒီ့အချိန်တုန်းက ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ တခြားအရာတွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားပေမယ့် အခု ဒီကိုပြန်ရောက်တော့ 37 Signals လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ပါးစပ်ထဲမှာ မကောင်းဘူးလို့ ပြောရမယ်။
သူတို့ သဘောထား တစ်ခုခုတော့ ရှိတယ်။ ဟုတ်တယ် ဟန်ဆောင်မှုဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဖော်ပြချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Jason ထံမှ ထူးထူးခြားခြား အထောက်အကူမပြုနိုင်၍ ဆိုးရွားသော အီးမေးလ်အချို့ကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ကျွန်ုပ်သည် ပုံမှန်အသုံးပြုသူဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့ စွမ်းပကားက တံဆိပ်ခတ်ခြင်းမှာ သေချာပေါက်ရှိပြီး အဲဒါအတွက် ကျွန်တော် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သို့သော် ဤကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်များသည် ၎င်းတို့ကို ထိခိုက်စေပြီး ၎င်းတို့ သိရှိနားလည်ရန် သို့မဟုတ် ဝန်ခံရန် ဂရုပြုခြင်းထက် ပိုမိုရှင်းလင်းသည်။
37S ၏ Matt သည် လုပ်ဆောင်ချက်များ/အရာများ/အရာဝတ္တုများ *အဓိပ္ပာယ်* သယ်ဆောင်သွားသည်ကို သဘောပေါက်ပုံမပေါ်ပေ။ ဟုတ်တယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကိုးကားလိုက်ရုံနဲ့ တိုက်ခိုက်တာ၊ "ငါတို့ မပြောဖူးဘူး...." မလုံလောက်ပါဘူး။ ဒါဟာ မယုံနိုင်လောက်အောင် မိုက်မဲပြီး သွေးထွက်သံယို စိတ်ထားပါပဲ။ နှိမ့်ချမှုအချို့သည် ရှည်လျားသည်။ မင်းဒါကိုရနိုင်ပြီး "ကွဲပြား" ဖို့ဆက်လက်။
သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ Basecamp ကို အလေးအနက်ထား မသုံးတော့ဘဲ တခြားသူတွေ သိပ်စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ လူတော်တော်များများက တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ “ရိုးရှင်းသော” တင်ပြချက်သည် အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ပါဝါကို လူတွေက မမြင်ကြဘူး ဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်စီးရီးတွေထက် ဒါက ဘာကြောင့် ပိုကောင်းလဲဆိုတာကို မမြင်ကြဘူး။ ပြီးတော့ အီးမေးလ်ရေလွှမ်းမိုးမှုကနေ အမှန်တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့် သာမာန်လူတွေကို ငါပြောနေတာ။ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန် လိုအပ်ပြီး၊ ၎င်းသည် Highrise နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ ရွှန်းလဲ့သော ချီးကျူးမှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် Jason က ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ လော်ရယ်တွေအပေါ် ထပ်ပြီး မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်။ Highrise တွင် ၎င်းတို့နှင့် အခကြေးငွေပေးချေသော ဖောက်သည်တစ်ဦးအနေဖြင့် ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သည့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဧရိယာအချို့ရှိသည် - တစ်ဖန် ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ် အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေပါမည်။
မေလ 13, 2007 မှာ 4: 34 pm တွင်
ကောင်းမွန်သောပို့စ်။ ကျွန်ုပ်သည်လည်း ကျွန်ုပ်၏ basecamp အကောင့်ကို မကြာသေးမီက ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ ဒက်စတော့အက်ပ်သို့ပြောင်းရန် အမြန်မဆုံးပါနှင့်၊ သို့သော် ယခုရရှိနိုင်သော ကောင်းသော basecamp အခြားရွေးချယ်စရာများ ရှိပါသည်။ Goplan အနည်းငယ်နာမည်ပေးရန်အတွက် OnStage နှင့်။
သြဂုတ် 16, 2007 မှာ 1: 19 AM
ချစ်ခင်ရပါသော SirZ၊ ရင်ဆိုင်ကြပါစို့- ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို လုံးလုံးစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါက ၎င်းတို့၏ဘလော့ဂ်တွင် ကိရိယာအကြောင်း ဆွေးနွေးလိုမည်မဟုတ်ပါ။ Basecamp ကို စမ်းကြည့်ဖူးပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပရောဂျက်အတွက် လုံးဝမှားယွင်းကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည် ပရောဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ဤဆောင်းပါးကို PCworld.com တွင်ကြည့်ရှုပါ။ ဒါကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားတယ်။ ရှုံ့ချသည် tool က တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပုံရတယ်။
တည်းဖြတ်သူ @ WhyBaseCampSux.org
29:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 2, 07
ဟီးဟီး။ တေးဂီတအဖွဲ့အား ဟောပြောခြင်း။ ကောင်းပြီ၊ သင်၏မူလက 37Signals ပရိတ်သတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမှလွဲ၍ ငါဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။
Basecamp အခြားရွေးချယ်စရာများကို ရှာဖွေနေသူများအတွက် ကျွန်ုပ်သည် ဤနေရာ၌ ကျွန်ုပ်၏ Basecamp bitch site တွင် စာရင်းကို ပြုစုထားပါသည်။
Basecamp မှလွဲ၍ ပရောဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများကို ရှာဖွေနေသူများအား ကူညီပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
29:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 7, 48
ရယ်စရာကောင်းတာက ငါ အခု Basecamp ကို အသုံးပြုနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ဖောက်သည်တစ်ယောက်ပါ။ မိုက်တယ် လို့ ပြောဖူးတာတော့ မသိဘူး… ကမောက်ကမတွေ အရမ်းများလာတယ်လို့ ခံစားခဲ့ရပြီး အဲဒါကို လိုက်လျောညီထွေ မနေနိုင်တော့ဘူး။
ကျွန်တော် အခုသုံးနေတဲ့ အတိုင်းပဲ၊ အကြီးမားဆုံး ကွာဟချက်ကတော့ အလုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ assignments တွေပါ။ အလုပ်များကို ဦးစားပေးပြီး၊ ၎င်းတို့ကို တာဝန်ပေးခြင်း၊ ပြီးမြောက်ခြင်း (နာရီနှင့် ရက်စွဲ) ခန့်မှန်းချက်များကို ရယူပြီးနောက် ၎င်းတို့အပေါ် အခြေအနေကို (50%, 75%, 100%) ရယူလိုပါသည်။ လက်ရှိအင်္ဂါရပ်များသည် မည်သူမဆို ဦးစားပေး၍ တာဝန်ပေးနိုင်သည်။
ဇန်နဝါရီ 20, 2008 မှာ 12: 40 AM
ငါသူတို့နဲ့ နည်းနည်းကြာကြာ တွဲနေပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ ဒီကောင်တွေနဲ့ ငါရခဲ့တယ်။ အမှန်တော့ ကျွန်တော် ဒီနေ့ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးပို့စ်ကို သူတို့ရဲ့ ဘုတ်မှာ တင်လိုက်တယ် (အောက်က ပြန်ထုတ်သည်)
“အင်း၊ နောက်ဆုံးတော့ ငါ့အကောင့်ကို ဖျက်လိုက်ရတယ်။ HR ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် အောက်ခြေအဆင့် အကောင့်များတွင် ထည့်သွင်းထားသော ကန့်သတ်ချက်များကို ကြည့်သောအခါ ကျွန်ုပ်အတွက်၊ ဤနေရာတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အခမဲ့ သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Backpack နှင့်/သို့မဟုတ် Basecamp ကဲ့သို့သော အခြားသော 37s ထုတ်ကုန်များနှင့် အသုံးပြုလိုပါက ပိုစျေးကြီးပါသည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုယူ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းထက် (ဥပမာ။ Backpack တွင် HR လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပေါင်းထည့်ခြင်း) 37s သည် သင်ငွေပေးချေရသည့်လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ထားပုံရပြီး ၎င်းသည် ပြိုင်ဘက်မရှိဖြစ်လာကာ ထုတ်ကုန်များကြားတွင် ပေါင်းစည်းမှုပင်မရှိပေ။ အကြံပြုချက်ပေးသော ဖောက်သည်များနှင့် “ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးသဘောထားကို သိသည်” နှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း ကျွန်တော် ငြီးငွေ့လာပါသည်။ ကျောပိုးအိတ်ကို ရရှိနိုင်ကတည်းက 37s သည် ကျွန်ုပ်အတွက် ကတိများစွာပေးခဲ့သော်လည်း ကံမကောင်းစွာဖြင့် မှေးမှိန်သွားသောကြောင့် ရှက်စရာပင်။"
ဇန်နဝါရီလ 27 ရက် 2008 ခုနှစ် ညနေ2နာရီ 02 မိနစ်
ဒီပို့စ်က ဆော့နေတာကြာပြီ၊ ဒါပေမယ့်2ဆင့်လောက်ရချင်ခဲ့တာ။ ငါတို့ PM software ပေါ်မှာ အရမ်းအားကိုးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကိုမဆက်ဆံပါက၎င်း၏ပရမ်းပတာဖြစ်သည်။ ထိုမှီခိုမှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် Vertabase ကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းမွန်သော ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများပေးကာ SaaS ထုတ်ကုန်ကောင်းများဖြစ်သင့်သည့်ပုံစံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို အာရုံစိုက်ကြသည်။
နိုဝင်ဘာလ 25 ရက် 2008 ခုနှစ် ညနေ 5:12 နာရီ
FWIW၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Basecamp မှ SharedPlan သို့ ရွှေ့လိုက်ပါသည်။ SharedPlan Central သည် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အကောင်အထည်ဖော်မှု ပံ့ပိုးမှုဖြင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းဘက်တွင် အာရုံစိုက်သည်။ Gantt ဇယားများ၊ Mac နှင့် Windows အတွက် မူရင်းအက်ပ်ဖြင့် အော့ဖ်လိုင်းဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယခုအချိန်အထိ မောက်မာခြင်းမရှိပါ ;->
26:2009 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 4, 35
ဤပို့စ်ပြီးနောက် နှစ်နှစ်နီးပါးခန့်တွင်၊ ယနေ့ ပရောဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှု/အလုပ်ခြေရာခံခြင်းအတွက် သင်အသုံးပြုနေသည့်အရာကို ကြားလိုပါသည်။
Basecamp မှ ထွက်ခွာရန် သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျေနပ်နေပါသလား။
လူအနည်းစု လာနေကြတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။http://www.smartsheet.com) ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် Basecamp မှ သင်မူလတင်ထားသည်နှင့် ဆင်တူသောအကြောင်းပြချက်အချို့ကို ကိုးကားထားသည်။ အခြားသူများမှာ ကလစ်နှိပ်ရန်-တည်းဖြတ်မှုနည်းသည့် အွန်လိုင်းဖြေရှင်းချက်ကို ရှာဖွေနေပုံရသည်။
26:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 16 တွင်
ဒီမေးခွန်းက မကြာခင် ဖြေရတော့မယ် Mark။ Basecamp မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်သေချာပါတယ် – သူတို့ရဲ့ အပလီကေးရှင်းတွေမှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပေါင်းစည်းမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တွန်းအားပေးတဲ့ SaaS ဖြေရှင်းချက်တွေကို ပိုပြီး စွဲဆောင်လာတယ်။ လက်ရှိတွင်၊ ကျွန်ုပ်သည် ပရောဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှုကို မလုပ်ရသေးသော်လည်း မကြာမီ ပြောင်းလဲသင့်သည်။
မတ်လ 2, 2009 မှာ 11: 22 AM
ထွက်ခွာသည် http://www.teamworkpm.net - သူတို့မှာ Basecamp တင်သွင်းသူရှိပြီး ဒီကောင်တွေက ROCK ပဲ။ သူတို့သည် Basecamp ကိုယူကာ နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသမျှအရာအားလုံးကို ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။
မေလ 11, 2009 မှာ 5: 20 pm တွင်
Steroids တွင် Basecamp၊ အနှုတ် 37s fluff 🙂
ဇွန်လ 15 ရက် 2010 ခုနှစ် နံနက် 10 နာရီ 18 မိနစ်
ပရောဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် မင်းရဲ့နာကျင်မှုကို ငါခံစားရတယ်၊ အဲဒါကို သဘောကျတယ်၊ ဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်။ Joomla သည် site ၏နောက်ဘက်တွင်ရှိပြီးအရှေ့ဘက်မှတဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ဖောက်သည်များအတွက် ဝဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် ဤအရာအား သတ်မှတ်ခြင်းအား ကျွန်ုပ် စွန့်လွှတ်လိုက်ပါပြီ၊ ၎င်းတို့က ၎င်းကို အသုံးမချတော့ပါ။ ဝဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စုစည်းထားခြင်းကြောင့် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
ငါဒီလိုမျိုးရှာနေတာ iGTD ကိုစစ်ဆေးပြီး ဒီကိရိယာအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။
10:2010 pm မှာနိုဝင်ဘာ 4, 23
မင်းရဲ့ စိတ်ပျက်အားငယ်မှုအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် နည်းပညာထက် သာလွန်သည်... ခလုတ်လိုင်းရှိ လူများအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းနှင့်အသုံးပြုသူအနေဖြင့်၊ 2010 အွန်လိုင်းပရောဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ချီးမြှင့်သည့် Clarizen ကို ကြည့်ရှုလေ့လာကြည့်ရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် SalesForce၊ Attask၊ Google တို့ကဲ့သို့ အစိတ်အပိုင်းများစွာပါရှိသော အစွမ်းထက်သော ပရောဂျက်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု။
ဇန်နဝါရီလ 13 ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ6နာရီ 58 မိနစ်
ကဲ ဒီနေ့တော့ Basecamp ကိုပြန်ရောက်နေပါပြီ။ 🙂 ငါ့ကိုပြောပြပေးတဲ့ @howeleadership ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မတ်လ 30, 2011 မှာ 8: 07 pm တွင်
Doug သည် basecamp သို့မပြန်မီ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဤထိုက်သင့်သော ပြိုင်ဖက်များထဲမှ တစ်ခုခုကို သင်ကြိုးစားခဲ့ပါသလား။ Basecamp တွင် Mac လူများကို ထည့်လိုက်သောအခါ အဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်းနှင့် ဆွဲငင်အားမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ စိတ်ပျက်မိပါသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ကျွန်တော် မှားမိသွားတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ဖောက်သည်များ၊ အတိုင်ပင်ခံများ၊ ရောင်းချသူများ၊ အလွတ်သတင်းထောက်များ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များကို cloud ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် bandwagon ပေါ်တက်ခွင့်ပြုသည့် လုပ်ငန်းဂေဟစနစ်ဟု ခေါ်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်အသုံးပြုနေသော ထုတ်ကုန်တွင် ကောင်းမွန်သော ပရောဂျက်/လုပ်ငန်းတာဝန် စီမံခန့်ခွဲမှု အစိတ်အပိုင်း၊ အချိန်ဇယားဆွဲပြက္ခဒိန်၊ အလုပ်အသွားအလာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်၊ အဆက်အသွယ် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဖိုရမ်များ၊ တိုက်ရိုက်ချတ်လုပ်ခြင်း၊ ဝဘ်ကင်မရာ ကွန်ဖရင့်၊ စခရင် မျှဝေခြင်း၊ အသုံးပြုသူများနှင့် အဖွဲ့များကို တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည့် အင်္ဂါရပ်များအဖြစ် ၎င်းသည် နည်းလမ်းကောင်း အေးတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ။ http://www.same-page.com
ဇန်နဝါရီလ 13 ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ7နာရီ 09 မိနစ်
FYI - ငါ "အောက်ကိုဆင်းခဲ့တယ်" ။ 🙂
25:2011 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 9, 49 တွင်
အမိုက်စား ပို့စ်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ ကုမ္ပဏီအတွက် ဤကဲ့သို့သော အချက်အလက်များကို စုစည်းရန် ကြိုးစားနေပြီး Basecamp ကို ဘာကြောင့် စွဲကပ်နေရကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ကို ရေးသားခဲ့သည်။ သင်စိတ်ဆန္ဒရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ပါ- http://lab.neo-pangea.com/blog/2011/02/basecamp-sucks-less-than-everything-else/
မတ်လ 13, 2011 မှာ 8: 53 pm တွင်
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ၊ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏အဖွဲ့အား လက်ခံရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့် Basecamp ကိုအသုံးပြုပါသည်။ cloud-based ပရောဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုရှိဖို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
Basecamp တွင် ကျွန်ုပ်၏ မှတ်ချက်များနှင့် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှုအပေါ် သင်ကြည့်ရှုလိုပေမည်။ အဖွဲ့လိုက်
မေလ 8, 2011 မှာ 6: 37 AM
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြံဥာဏ်များမျှဝေရန်နှင့် သုံးစွဲသူအဆက်အသွယ်ကိုခြေရာခံရန် Social Media Magic တွင် basecamp ကိုအသုံးပြုပါသည်။ သူတို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ သူတို့ဘလော့ဂ်ကို အများကြီးဖတ်ရတာ တကယ်မဟုတ်ပေမယ့် အဲဒါက စာရေးသူရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်က ဒီလိုအသုံးဝင်တဲ့ အသုံးချပလီကေးရှင်းကနေ လွဲချော်မသွားပါစေနဲ့။ အပလီကေးရှင်းအသစ်က သင့်အတွက် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ အနာဂတ်တွင် သင်နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
20:2011 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 27
Basecamp တွင် အသုံးပြုနိုင်စွမ်း မြှင့်တင်မှုများ များစွာရှိသည်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာ နောက်ထပ်တည်ဆောက်ထားတာ မရှိလို့ အံ့သြမိပါတယ်။ ၎င်းသည် အလုပ်လုပ်ပုံတွင် ထင်ရှားသော တိကျသည့်အရာများ မရှိတော့သောကြောင့် တည်ထောင်ထားသော ပရောဂျက်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိလာသော သုံးစွဲသူအသစ်များသည် အရာများကို ရှာဖွေရမည့်နေရာကို ရှာဖွေရန် အခြားသူတစ်ဦးထံ ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ (ဟုတ်ပါတယ်၊ တခါတရံမှာ သင်ရှာဖွေမှုမှာ အရာတွေကို ရှာတွေ့နိုင်ပေမယ့် အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။)
'f' ဟူသော စကားလုံးကို အသုံးပြုခြင်းတွင် ငါသည် မင်းနှင့်အတူရှိနေသည်။ တခါတရံမှာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကို လစ်လျှူရှုထားပေမယ့် စာရေးတဲ့အခါ အဲဒါကို နားမလည်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ဒါဟာ မင်းရဲ့စာဖတ်သူတွေကို မလေးစားမှုနဲ့ ရောနှောထားတဲ့ ကုမ္ပဏီအတွက် မသင့်လျော်ဘူးလို့ ငါယုံကြည်တယ်။ အရက်မူးနေသော အပေါင်းအသင်းများနှင့် အပြင်ထွက်သည့်အခါ စကားပြောဆိုပုံနှင့် အများသူငှာ မျှဝေသည့်အရာတို့ကြားတွင် ခြားနားချက်ရှိရန် သေချာပါသည်။
သြဂုတ် 19, 2011 မှာ 12: 03 AM
အိုး။ ဒီပို့စ်ကိုမြင်လိုက်ရုံနဲ့ comment အများစုကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဘောင်းဘီတစ်ထည်မှာ အများကြီး။ Basecamp ကို မကြာသေးမီကမှ စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်အား ချို့ယွင်းစေသော အရာများစွာရှိပါသည်။ အဲဒီထဲက တစ်ခုကတော့ ရက်စွဲတစ်ခုရိုက်ရုံနဲ့ မယုံကြည်နိုင်ဘဲ ပေါ်လာတဲ့ပုံကနေ ရက်စွဲတစ်ခုကို ရွေးရမှာပေါ့။ တကယ်လား? ငါ တစ်ခုခုမှားနေတာလား။ ဘယ်လိုသွားလဲ ကြည့်မယ်။
1:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 6, 23 မှာ
အိုး၊ အဲဒီ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေက ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းက ဖြစ်ပုံရတယ်… အဲဒါက ငါ့ကို တကယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အရာတစ်ခုဆီ ဦးတည်သွားစေတယ်။ ဒီပို့စ်ကို ဘယ်တုန်းကရေးတာလဲ။ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈၊ မနေ့က။ ရက်စွဲပါ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမပါဘဲ ကျွန်ုပ်ဖတ်နေသော အချက်အလက်သည် ယနေ့ထိ သက်ဆိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
ပို့စ်တစ်ခုမှာ ရက်စွဲမထည့်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အသုံးပြုသူရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။
btw၊ ကျွန်တော် basecamp ကိုသုံးနေတုန်းပါပဲ – ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်၊ အားနည်းချက်တွေရှိပေမယ့် တခြားပြင်ပအက်ပ်တွေနဲ့သုံးတဲ့အခါ ပြဿနာအများစုကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုရခက်ခဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖောက်သည်များထံမှ တိုင်ကြားမှု တစ်ကြိမ်မှ မရှိခဲ့ပါ။ ငါ့ ၂ ဆင့်ပဲရှိတယ်။
စက်တင်ဘာ 2, 2011 မှာ 12: 48 AM
ဒါဝိဒ်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဖြစ်သည်။ ရယ်စရာကောင်းတာက ငါ အခု Basecamp ကိုပြန်ရောက်နေပြီ။ 🙂
နိုဝင်ဘာလ 29 ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ 5:55 နာရီ
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ Basecamp အကောင့်ကိုလည်း ပယ်ဖျက်ထားသော်လည်း 37signals ၏ အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာ တကယ့်ကို ထူးခြားပြီး အလိုလိုသိသာတဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ဖန်တီးခဲ့တာပါ… အဲဒီတုန်းက။ အခု ငါ ပိုမျှော်လင့်တယ်။ မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်သည် KanbanTool ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်- ကျွန်ုပ်သည် အင်တာဖေ့စ်ကို လုံးဝနှစ်သက်သည်။ တစ်နေ့ကျရင် Basecamp အကြောင်းကို ထပ်ပြီးပြောပြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဧပြီ 19, 2012 မှာ 3: 45 AM
ကျွန်ုပ်တို့သည် Basecamp ကို နှစ်အတော်ကြာ အသုံးပြုနေသော်လည်း မကြာသေးမီက (လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ခန့်) က comindware မှ အခြားလုပ်ဆောင်စရာ ခြေရာခံဆော့ဖ်ဝဲဖြေရှင်းချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီတွင် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ရွေးချယ်စရာများနှင့် ပိုမိုဆန်းသစ်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ElasticData နည်းပညာ။ မစမ်းရသေးရင် စမ်းကြည့်ပါ။
ဧပြီ 24, 2012 မှာ 3: 21 pm တွင်
basecamp အသစ်ကို မင်းဘယ်လိုထင်လဲ ငါကြားချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ပရိတ်သတ်မဟုတ်ပေမယ့် UI က စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အတွေးများ?
ဧပြီ 24, 2012 မှာ 4: 51 pm တွင်
ပြောင်းလဲခြင်းတွင် ကန့်သတ်ချက်အချို့ရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်မပြောင်းပါ။ ဒါပေမယ့်၊ ကျွန်တော်မြင်ဖူးတဲ့ ဗီဒီယိုအားလုံးမှာ အလွန်မိုက်တဲ့ အသုံးဝင်မှုနဲ့ အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံ မြှင့်တင်မှုတွေ ပြုလုပ်ထားပုံရပြီး ပရောဂျက်တွေကြား အပြန်ပြန်အလှန်လှန် လွယ်ကူစွာ ပြန်ထနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပုံပါပဲ။
ဧပြီ 12, 2014 မှာ 9: 08 AM
မင်္ဂလာပါ၊ New Basecamp သည် ကောင်းမွန်သော်လည်း ၎င်းသည် gantt ဇယား၊ ဘာသာစကားများ၊ inbuilt ချတ်၊ အချိန်ခြေရာခံခြင်း၊ အလုပ်ခွဲများ စသည်တို့ကဲ့သို့ အင်္ဂါရပ်များစွာတွင် ချို့တဲ့နေသေးသည်။
ဧပြီ 14, 2014 မှာ 12: 39 pm တွင်
သူတို့က gantt ဇယားကို ဘယ်တော့မှ ထည့်မယ်မထင်ဘူး ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် မဟုတ်ဘူးလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဖွဲ့ငယ်များနှင့်အတူ၊ ၎င်းတို့ကို ပရောဂျက်ငယ်များအတွက် အသုံးပြုပြီး Gantt ဇယားများကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းမှ ၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များထံ ပြောင်းရွှေ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
18:2012 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 43 တွင်
"ကျိန်ဆဲခြင်း" အစား "ကျိန်ဆဲခြင်း" ဟုဆိုသောလူများက ကျွန်ုပ်အား ပို၍စိတ်ပျက်စေပါသည်။ – ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဟာ အသုံးချမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့ အညစ်အကြေးဟောင်းတွေကို တူးဖော်နေပုံရတယ်။